स्मार्ट टेक्नोलोजी र टेक्नोक्रेट विश्वव्यापी प्रशासनले मौसमलाई बचाउनेछ: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	3 डिसेम्बर 2019 मा	•9टिप्पणिहरु
टेक्नोक्रेट विश्व सरकारले हाम्रो ग्रहलाई विनाशबाट बचाउने एक मात्र समाधान हो जुन हाम्रो लागि आउँदै गरेको जलवायु प्रकोपको परिणाम हो। जब चलचित्र ताराहरूले अलार्म घण्टी बजाउँछन्, तपाईंले विश्वको आधा जनसंख्यालाई निश्चित गरिसक्नुभयो कि वास्तवमै केहि गर्न आवश्यक छ, किनकि राम्रो देखिन्छ र प्रशंसकको आराधना नै आधार हो। ब्राइड सहितको केटीले पनि राम्रो गरिरहेछ, त्यस्तै तल्लो देशका साधारण पत्रकारले जस्तै जसले विश्व नेताहरूलाई विस्फोट दिन्छ।
त्यो केटीको ठूला हजुरबा हजुरआमा, Greta Thunberg, यो संग एरर्नियस प्रभाव (ग्लोबल वार्मिंग) र आफैंले नोबेल पुरस्कार आविष्कार गरेको त्यो पुरस्कारको सह-संस्थापकको रूपमा, हामी सुन्न चाहँदैनौं। त्यो 'साधारण लेखक', Rutger Bregman, लाई कल गर्दछ अत्यन्त प्राविधिक विश्व शासन, हामी वास्तवमै यो ठीक ठान्छौं। जे भए पनि, यो 1 मिनेट 12 को लागी हो, त्यसैले तपाईंले कडा कदम चाल्नु पर्छ। हामी विश्वास गर्छौं कि ती सबै राम्रो देखिने फिल्मका तारा मार्फत र हामी विश्वास गर्छौं कि नासाबन्दी र विलुप्त हुने नाटकीय छवि मार्फत। सामान्य व्यक्तिले तथ्यहरू अध्ययन गर्न समस्या निम्त्याउँदैन, तर फिल्म स्टार, राजनीतिज्ञ र मिडियामा भरोसा राख्छ।
अभ्यासमा यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणको त्रासको प्रमुख प्रमुख शक्ति हो भन्ने कुराको तल झर्छ र यो देखाइएको छ कि विलुप्त हुने विद्रोहले खुलेआम सीआईए जीन शार्प (रंगीन क्रान्ति) लाई निन्दा गर्दछ। विधि हामी मर्न लाग्नेछौं भनेर जनसमक्ष बुझ्न। उही समयमा, पछाडि सन्देश बचाईएको छ। गम्भीर र प्रख्यात वैज्ञानिकहरू, जसले CO2 परिणामस्वरूप पृथ्वीको ताप हुँदैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्दछन्, कडा आक्रमण गरिरहेका छन्। त्यो शारीरिक रूपमा पनि हुन्छ:
“दर्जनौं वैज्ञानिकहरू सहित एक्सएनयूएमएक्स भन्दा बढी व्यक्तिहरू हाल जर्मनीमा लुकेका छन्। म ती मध्ये एक हुँ। म भन्न सक्दछु कि म म्युनिकमा छु, तर म तपाईंलाई मेरो होटेल भन्न सक्दिन। म तपाईंलाई भन्न सक्छु कि वैज्ञानिकहरू शुक्रवार र शनिबार वैज्ञानिक ज्ञान साझा गर्न भेला हुनेछन्, तर मँ तपाईंलाई भन्न सक्दिन। उक्त बैठकमा वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित हावापानी स crisis्कटको विरोधाभासपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत गर्ने कुरा जनताका लागि योजना गरिएको थियो तर फासिस्ट जलवायु अपराधीहरूले हामीलाई लुक्न बाध्य तुल्याए। जर्मन सरकारले वैज्ञानिकहरुलाई हिंसाको खतराबाट जोगाउन इन्कार गरेको छ।
त्यो टुक्रा बन्द छ यो लेख, जसले एक पटक फेरि देखाउँदछ कि सत्य भावनाको माध्यमिक हो। वास्तवमा यस्तो भावना सिर्जना गरिएको छ कि व्यक्तिहरू यो वैधानिक पाउँदछन् कि कदम चालेको आक्रमकता र सैन्यवादी कदमहरुका साथ। जे भए पनि, यदि पृथ्वीको विनाशको खतरा छ, त्यसैले विचार यो छ, हामीले आफूलाई ती मानिसहरुका बिरूद्ध बचाउनु पर्छ जसले यसलाई देख्न चाहँदैनन्।
मौसम विश्वास गर्नेहरूको समूहले अन्धा अविश्वासीहरूको बिरूद्ध मानवता र पृथ्वीको रक्षा गर्नुपर्दछ। र यसैले हामी नयाँ जैकेटमा आफूलाई स्पेनिश इन्क्वीजेशन भन्छौं। पृथ्वीलाई बचाउन यत्तिको उत्सुक रहेको शान्तिप्रिय मानव एकाएक कुनै पनि हिसाबले टाढा बस्न तयार देखिन्छ। तर हे, हामी हाम्रो समृद्ध पश्चिममा त्यस्तो मानसिकताको अभ्यस्त भएका छौं किनकि यदि हामी ती भयानक तानाशाही (तेल-धनी) देशहरूमा "प्रजातन्त्र" ल्याउँछौं भने पनि हामी वस्तुहरूलाई ड्रोन र बमले भत्काउन हिचकिचाउँदैनौं। जब यो मौसममा आउँदछ, मानिसहरूले अब निर्दयी र आक्रमण बिना दयाको पनि छनौट गर्छन्। ती व्यक्तिले वैज्ञानिकहरूको कुरा सुन्न कहिल्यै चिन्ता लिएनन् जो सुन्न हुँदैन (जस्तै यहाँहोईन, तिनीहरूले कानमा आफ्ना औंलाहरू राखे र तिनीहरूको स्थानमा टाँसिए।
तपाईं मानिसहरूलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न जो साँच्चिकै विश्वास गर्छन् कि पृथ्वीको अन्त हुनेछ यदि हामी यस बारे केही पनि गर्दैनौं भने यो फरक छ, किनकि तिनीहरूलाई भनिएको छ कि यो चरम दक्षिणपन्थी विचारधारा हो। यो कारणको बारेमा होइन, तर शुद्ध पेटको भावनाको बारेमा हो। त्यहाँ एकल जलवायु परिवर्तनकर्मी छैन जो CO2 वास्तवमा के हो भनेर जान्दछ र यसको प्रभाव यो हो कि यसले पृथ्वीलाई हरियो बनाउँछ तर न्यानो बनाउँदैन। यहाँसम्म कि बयान दोहोर्याउँदा पनि, पढ्न सकिन्छ, तर यो तुरुन्तै हिल बालुवामा खस्छ। तपाइँ एक जलवायु कार्यकर्ताको रूपमा त्यो सुन्न चाहनुहुन्न। तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ, किनकि तपाईंले समुद्रमा यति धेरै प्लास्टिक तैरिरहेको देख्नुभयो र ध्रुवीय भालुको जनसंख्या घट्दै देख्नुभयो। मिडियाले जनताको धारणालाई प्रभावित पार्न गरेका सबै कुरा प्रभावकारी प्रचार भएको देखिन्छ र जहिले पनि प्रचारसँगै यसलाई सानो समूहले मात्र बुझ्छ। त्यो किनभने मानिसहरू केवल सरकारहरू र मिडिया झूटा गर्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्न सक्दैन। पृथ्वीले (र मानवता र सबै जनावर र बोटबिरुवा) लाई बचाउन जनताले आवश्यक पासपनामा आफ्नै जाललाई अँगाल्छ।
जस्तो रुटर ब्रेगम्यान टेक्नोक्रेसीको लागि आह्वान गरिएको छ र यदि हामीले अब धेरै देशहरूमा साम्यवादको किसिमको कुरा देखिरहेका छौं भने जनताले कुन दिशा पछ्याउने भनेर हामी चिन्न सक्छौं। मा यो लेख मैले वर्णन गरे कि कसरी पूँजीवाद र कम्पनीहरूको स्केलिंगले बहुराष्ट्रियतामा डोर्‍यायो। वास्तवमा, त्यसले 'नयाँ ज्याकेटमा साम्यवाद' को आधार बनायो। इ England्ल्याण्डमा हामी पहिले नै देख्यौं कि जेरेमी कर्बिन ठूला कम्पनीहरू फेरि राष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छ (राज्य स्वामित्व बनाउँदै) र हामी छिट्टै त्यो प्रवृत्ति देख्नेछौं, निश्चित रूपमा जब योजनाबद्ध आर्थिक क्र्यास आउँदैछ; होशियारीका साथ निर्माण गरिएको ब्रान्ड 'सही' (जुन डोनाल्ड ट्रम्प, बोरिस जोनसन, थियरी बाउडेट, एलेक्स जोन्स, जेन्सेन, इत्यादिसँग सम्बन्धित छ) दोष दिईनेछ।
आलोचनात्मक सोचलाई 'सही' लेबल गरिएको छ र त्यो लेबल चाँडै नै सबै चीजको लागि दोष दिइन्छ र त्यसैले यसले हस्तक्षेपको चरम रूपको लागि ठाउँ सिर्जना गर्दछ। हस्तक्षेपको यो चरम रूप एक टेक्नोक्रेटिक ज्याकेटमा साम्यवादले आकार दिनेछ। यसले शक्तिलाई केन्द्रीकरणमा खतरा हुने सबै विचारहरूमा निश्चित प्रतिबन्ध लगाउनेछ। आखिर, त्यस विचारको शरीरले त्यतिबेलाको अर्थव्यवस्थालाई उड़ायो र त्यो विचारको शरीरले मौसमलाई खतरामा पार्दछ।
यस्तो कम्युनिष्ट टेक्नोक्रेसी जस्तो के देखिन्छ? ठिक छ, यदि अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा गइरहेको छ भने, हामीसँग पहिले कडवी गरिबीको अवधि हुनेछ (र त्यसैले अराजकता र आतंक)। यसले सामान्यतया नयाँ बलियो बाहुको लागि पावर वैक्यूम सिर्जना गर्दछ जुन समाधान प्रदान गर्दछ। यो आशा गरिएको छ कि त्यसबेलासम्म मानिसहरूले त्यतिबेलाको ठूलो आर्थिक आवश्यकताको समाधानको रूपमा आधारभूत आम्दानीलाई अँगाल्ने छ। वित्तीय प्रणाली त्यतिबेला दिवालिया हुनेछ कि नयाँ कठोर हस्तक्षेप आवश्यक छ।
विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको पूर्ण पुनःसेट, जसमा दशकौंसम्म डलरले प्रभुत्व जमाए (यसको परिणामका साथ अमेरिकाले विश्वको बाँकी भागमा प्रभुत्व जमाउन सक्छ) एक समाधान हुनेछ। एक आर्थिक क्र्यास, सामाजिक अराजकताको परिणामस्वरूप, माथिबाट समाधानको लागि आह्वान मद्दत गर्दछ। पृथ्वीको आसन्न पतनको भावना दोस्रो तर्क हो जसले कडा हस्तक्षेपको लागि आह्वान गर्दछ। दुबै शक्तिको केन्द्रीकरणको लागि पुकार्नेछन्। यो टेक्नोक्रेसीद्वारा सम्पन्न हुनेछ।
टेक्नोक्रेसीको अर्थ यो छ कि त्यहाँबाट केन्द्रीय आयोजन टेक्नोलोजिकल समाधान छ यसलाई अझ राम्रो गर्नका लागि। यसमा स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय प्रशासन पनि चाहिन्छ। ब्लकचेन र 5G 'चीजहरूको इन्टरनेट' स्मार्ट ग्रिड समाधान प्रदान गर्दछ। एक वित्तीय रिसेट र एक नयाँ वैश्विक वित्तीय प्रणाली विश्वव्यापी क्रिप्टो मुद्रा मानकको साथ उत्तम रूपमा पूर्ण गर्न सकिन्छ। यदि, थप रूपमा, तपाईले अर्थव्यवस्थालाई कामको लागि बुनियादी आम्दानी दिएर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तब तपाईंसँग (त्यतिबेला) थकित जनसंख्या तपाईंको हातमा हुनेछ।
क्रिप्टो मुद्रा एकदम उपयोगी छ जब यो कठोर वातावरणीय उपायहरूको लागि आउँदछ। 'चीजहरूको इन्टरनेट' भित्र तपाईं उत्पादन वा सेवाहरूको हरेक लेनदेनको विस्तृत रूपमा निगरानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाई एक पतनको झन झन निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ कि वातावरणीय फूडप्रिन्ट के हो र त्यस अनुसार करहरू समायोजित गर्नुहोस्।
सुविधाको खातिर, मानौं कि संयुक्त राष्ट्रको सिक्का हुनेछ, उदाहरणका लागि। केही पुरानो मुद्राको औसत मूल्य प्राप्त गर्ने मुद्रा (यूरो, युआन, डलर, रूबल)। कल्पना गर्नुहोस् कि नयाँ शासन - जसले शक्ति शून्यतामा प्रवेश गरिरहेको छ (आर्थिक र सामाजिक अराजकताले गर्दा "सही कारणले उत्पन्न हुन्छ") - केन्द्रीय बैंकहरू रिसेट गर्ने र सबै debtsणहरू शून्य गर्ने र आधारभूत रकम सेट गर्ने विचार सुझाव दिन्छ। संयुक्त राष्ट्रको सिक्का जारी गर्न। प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक महिना 1000 UN-coines आधारभूत आय प्राप्त गर्दछ। उत्पादनहरूका मूल्यहरू पनि रिसेट हुन्छन् र अर्थव्यवस्था पुनर्स्थापित हुन्छ। ठूला कम्पनीहरू राष्ट्रियकरण गरीएको छ, जसले गर्दा तिनीहरू पनि mountainण माउन्टबाट मुक्त हुन्छन् र आर्थिक इञ्जिन फेरि चालू हुन्छ। हामी पहिलेदेखि नै एक प्रकारको कम्युनिष्ट अवस्थामा छौं, तर त्यतिखेर जनता प्रभावित हुने छैन। जबसम्म सबै कुरा फेरि जीवित हुन्छन्।
यस्तो नयाँ क्रिप्टो भुक्तान एकाई (उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्र सिक्का यहाँ भर्खरै बनाइएको हो) ले 'चीजहरूको इन्टरनेट' को 5G ग्रिड भित्र सबै कुरा पूर्ण रूपमा पत्ता लगाउन योग्य बनाउँदछ। यदि तपाईं त्यस हजार यूएन सिक्का बाहिर एक सिगरेट को एक खरीद किन्नुहोस्, तपाईं मात्र वातावरणीय बोझ (यो कानून के हो यो हो), तर यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्दछ। यदि तपाइँ अझै मासु खान्नुहुन्छ भने तपाइँले वातावरणको लागि नराम्रो गरिरहनु भएको छ किनभने ती गाईहरूले "नाइट्रोजन" उत्सर्जन गर्दछन् र अझ राम्रोसँग तपाईको स्वास्थ्यको लागि शाकाहारी जीवन जिउनुहुन्छ।
तपाईंको स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम स्वचालित रूपमा 'चीजहरूको इन्टरनेट' मा वृद्धि गर्न सकिन्छ, किनकि तपाईंले उपभोग गर्नुहुने सबै चीज तुरून्त मापन गर्न सकिन्छ। तपाईंको वातावरणीय कर तपाईको संयुक्त राष्ट्रको सिक्का क्रिप्टोकरन्सी ब्यालेन्सबाट पनि सीधै डेबिट गर्न सकिन्छ। स्मार्ट ग्रिडमा, अनुहार पहिचान क्यामेरा र माइक्रोफोन जताततै झुण्डिएर, यो हुन सक्छ जब तपाईं अल्बर्ट हेन बक्स अफिसमा भन्नुहुँदा, "म्याम, के तपाईं मेरो लागि गम को एक प्याकेट छ?“, तपाईले तुरून्त पेनल्टी पोइन्ट पाउनुहुन्छ किनकि तपाईले 'maam' शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। नयाँ केन्द्रीय प्रशासनको नयाँ भेदभाव कानून बताउँछ कि यो LGBTI समूह को लागी भेदभावपूर्ण छ। चिनियाँ तिल क्रेडिट मोडेलमा आधारित समाज अनुगमन गर्ने विधि पहिले नै कार्यान्वयन भइरहेको छ सुस्त परिचय डच फुटबल चरणमा। पेनाल्टी पोइन्ट्स तब स्वचालित रूपमा तपाईको यूएन सिक्का ब्यालेन्समा कमी आएको हो।
टर्की, त्यो देश जुन मैले वर्षौंदेखि बोल्दै आएको हुँ जुन 2023 को लागि युरोपमा सत्ता लिने पार्टी हो, 2020 मा क्रिप्टो लाईयर पेश गर्न सबै कुराको व्यवस्थित गरिसकेको छ। "देशको राष्ट्रिय ब्लकचेन-आधारित डिजिटल लीरा वार्षिक राष्ट्रपति कार्यक्रम 2020 अनुसार केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने तालिका छ, Cointelegraph5नोभेम्बर मा टर्की रिपोर्ट।"पहिले पढ्नुहोस् यो लेख.
टेक्नोक्रेटिक संसारमा, सबै चीज एक टेक्नोलोजिकल केन्द्रीय बिन्दुबाट अनुगमित हुन्छ। यो टेक्नोलोजीले यसलाई गर्न एकदम राम्रो चरणमा गर्न सम्भव बनाउँदछ। यदि रुटर ब्रैग्मन जस्ता व्यक्तिहरूले टेक्नोक्रेटिक प्रशासनको लागि अनुरोध गरे र जलवायु परिवर्तनको बारेमा सोच्ने सबैलाई दण्ड दिनको लागि लिंक गरे भने, उदाहरणका लागि, तब हामी केवल यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दछौं कि त्यो टेक्नोलोजीले सोच्ने पुलिसको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। ठूला डाटा प्रणालीहरू जुन अब हाम्रो सबै इन्टरनेट ट्राफिक निगरानी गर्दछन्, सबै स्मार्ट सेन्सरहरू सहित, प्रत्येक व्यक्तिले कुन विचारहरूको पालन गर्छ भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउनेछ। यदि हामी त्यसलाई 'चीजहरूको इन्टरनेट', ट्रेसेबल मनी (क्रिप्टो) र चिनियाँ मोडेल तिल क्रेडिट पोइन्ट प्रणालीसँग जोड्छौं भने हामी एक निर्माणको साक्षी छौं फासिस्ट टेक्नोक्रेसी:
फासीवादी टेक्नोक्रेसीमा राज्यले आफ्ना विचारहरू व्यक्तिमा थोप्न सक्दछ जो पूर्ण निर्भरतामा आउँदछन् र त्यस दिनको कुनै पनि समयमा निगरानी गरिन्छ।
मेरो नयाँ पुस्तकमा म वर्णन गर्दछु कि यो कसरी स्क्रिप्ट हो जुन शताब्दियौंदेखि शेल्फमा रहेको छ र म कसरी व्याख्या गर्दछु इंद्रधनुष नयाँ विश्व धर्म को परिचय को प्रतीक। इन्द्रेणी परिचय हुन को लागी नयाँ विश्व शासन को प्रतीक हो कि एक नयाँ धर्म लाई लागू गर्दछ। तपाईलाई यो याद पनि हुन सक्छ कि इन्द्रेणीको बाढीका कथाहरू जुन संसारका विभिन्न संस्कृतिहरू र धर्महरूमा पाउन सकिन्छ। त्यो इन्द्रेणीले बाढी पछि पृथ्वीको रूपान्तरण प्रतिनिधित्व गर्दछ जसले सबै चीज मेटायो।
हामी एक नयाँ ठूलो बाढीको पूर्व संध्यामा छौं। यसैले इन्द्रेणी पनि यो आन्दोलनको प्रतीक हो। परिवर्तन मानवजातिबाट पारित हुनेछ प्रविधिमा आधारित नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी सिर्जना गर्दछ। एक लुसिफेरियन (इन्द्रेणी) टेक्नोक्रेट विश्व सरकारको झण्डा मुनि ट्रान्सजेंडर transhuman लक्ष्य हो। भविष्य लि gender्ग तटस्थ छ र भविष्य transhuman हो। तपाईले अलि अस्पष्ट फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन यसैले खोज्न सुझाव दिइन्छ। यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ। त्यसकारण यो मेरो पुस्तक पढ्नको लागि उपयोगी छ, जसमा म विश्व शासन र विश्व धर्मको पूर्ण रोडम्याप वर्णन गर्दछु र मनसाय के हो विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछु।
स्रोत लिङ्क सूची: townhall.com, theguardian.com, cointelegraph.com
ट्याग: 5G, चीनी, शहर, क्रेडिट, क्रिप्टो, मुद्रा, विशेष, ग्रिड, इन्टरनेट, of, sesame, स्मार्ट, टेक्नोक्रेसी, कुरा, विश्व सरकार, विश्व धर्म
3 डिसेम्बर 2019 मा 13: 39
3 डिसेम्बर 2019 मा 16: 34
3 डिसेम्बर 2019 मा 15: 00
जूता फीता लेखे:
4 डिसेम्बर 2019 मा 07: 39
हाई मार्टिन, फेरि राम्रो लेख! के तपाईंलाई कहिले र कहाँ इहुमान हेर्ने हो थाहा छ? दुर्भाग्यवश मैले यो फेला पार्न सकिन।
धन्यवाद, यसलाई जारी राख्नुहोस्!
4 डिसेम्बर 2019 मा 11: 13
मैले के बुझें कि फिल्म स्थानीय सांस्कृतिक चलचित्रमा शूट गरिएको छ। मैले यो फिल्म आफैंमा देखेको छैन र दिमागमा राखिएको छैन कि यसले सुरक्षा सुरक्षाको रूपमा सेवा गर्न फेरि सत्य देखाउँदछ, तर यदि तपाईंले यसलाई छेड्नुभयो भने तपाईं आफ्नो बाटोमा राम्रो हुनुहुन्छ।
मेरो विचारमा यो भन्दा पहिले मेरो पुस्तक पढ्न उपयोगी छ, किनकि म हाम्रो उत्पत्तिको एकलता र transhumanists को गलत एकलता बीचको भिन्नता वर्णन गर्दछु। यस बाहेक, मँ उनीहरूलाई किन भन्छु (पावर ब्लक जसले हामीलाई यस दिशामा निर्देशित गर्छ) हामी एआई मा मर्ज गर्न चाहन्छौं।
3 डिसेम्बर 2019 मा 21: 27
फेसबुक मा एक पाठक को टिप्पणी:
स्मार्ट एनएलमा 'स्मार्ट' मा अनुवाद गरिएको छ। जे होस्, यो पूर्ण रूपमा भिन्न चीजको लागि एक संक्षेप हो: "आवासीय क्षेत्रमा गोप्य सैनिक हातहतियार"।
डचमा, "आवासीय वातावरणमा गोप्य सैनिक हतियार"
3 डिसेम्बर 2019 मा 21: 57
ग्रेटा थुनबर्गको जेनिफर मोर्गन ग्रीनपीसका प्रशिक्षक हुन् जसले द गोलोको विश्व आर्थिक मञ्चमा अल गोर (पूर्ण असन्तुष्ट, सबैले ओगटेको झूटको वृत्तचित्र 'एक इन्कन्भेभिएन्ट ट्रुथ') का साथ यात्रा गरेका थिए। "ग्रीनपीस ग्रेटा वित्त, र तिनीहरूका दाताहरु समाजवादी को एक लामो सूची को शामिल। ग्रेटा चुनाव भन्दा दुई दिन अघि क्यानडाको अल्बर्टामा देखा पर्‍यो र मानिसहरूलाई जलवायु परिवर्तनका कारण उनीहरूले आफ्नो जागिर छोड्नु पर्ने बताएका थिए।
ग्रीनपीस एनजीओ थियो जसले इन्द्रेणीलाई विश्वभर प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। मेरो पुस्तकमा मँ इन्द्रेणी किन नयाँ टेक्नोक्रेटिक वर्ल्ड अर्डरको प्रतीक हो भनेर वर्णन गर्दछ र यसले हामीलाई एआईको साथ मर्जर तर्फ डोर्‍याउँछ।
मेशिनमा स्वागत छ (स Pink्गीत गुलाबी फ्लाइड)।
4 डिसेम्बर 2019 मा 11: 12
4 डिसेम्बर 2019 मा 11: 18
हो, यो ब्यान्ड मेरो मनपर्ने ... बलियो गीत मा रहन्छ।
यसबाहेक, नाम महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले पहिले नै 'मेसिन' आफु थोपरिएको देखे।
« रट्टर ब्रैगम्यानले एक फासीवादी संयुक्त राष्ट्र शासनको लागि आह्वान गर्दछ
इतिहास जान्नुहोस् संयुक्त राष्ट्र एजेन्डा 2030 बुझ्नका लागि »
कुल भ्रमण: 16.007.837
लिबियाले स्पष्ट पार्छ कि युरोपमा कुन देशहरू टर्कीले लिनेछ
मार्टिन भिजल्याण्ड op कोरोना भाइरस ('वुहान भाइरस') को एक अंग्रेजी प्याटेन्ट छ: EP3172319B1
माउस खेल्नुहोस् op कोरोना भाइरस ('वुहान भाइरस') को एक अंग्रेजी प्याटेन्ट छ: EP3172319B1
हेन्नाग op कोरोना भाइरस ('वुहान भाइरस') को एक अंग्रेजी प्याटेन्ट छ: EP3172319B1
guppy op कोरोना भाइरस ('वुहान भाइरस') को एक अंग्रेजी प्याटेन्ट छ: EP3172319B1